March 18, 2021 Dai 3, 2022 0
Zuva rimwe Qualcomm isati yazivisa zviri pamutemo iyo Snapdragon 888, iyo kambani zvishoma zvakadzama mureza weSoC uye yakasimbisa mazita e14 OEMs avo vaizovhura zvishandiso neiyo processor nyowani. Xiaomi aive mumwe wevanogadzira pane izvo zvinyorwa, uye kambani yakaseka iyo Mi 11 chingori zuva mushure mekutanga kwekutanga kweQualcomm. Mavhiki mashoma pasi pemutsara, iyo Chinese OEM yakaratidza kuti yaizovhura iyo Mi 11 gore risati rapera, ichiita iyo iyo chokutanga mudziyo kuratidza Qualcomm's yazvino mureza chip.
Sezvakavimbiswa, Xiaomi akasimudza makavha abviswa iyo Mi 11 kuChina muna Zvita 28, ichitipa kutarisa kwedu kwekutanga dhizaini yayo, kutaurwa, uye zvakasarudzika maficha. Iyo kambani ikozvino iri kufanogadzirira kuburitsa mamwe matatu madhijitari muiyo Mi 11 lineup - iyo Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, uye Mi 11 Ultra - izvo zvinotarisirwa kubuda imwe nguva gare gare gore rino. Kana iwe ukarasikirwa neyakavharidzirwa yedu yeiyo Xiaomi Mi 11 mutsara, hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezveMi 11, iyo Mi 11 Lite, iyo Mi 11 Pro, uye iyo Mi 11 Ultra!
Mi 11 akateedzana: Zuva Rekuburitswa
Xiaomi akatanga iyo Vanilla Mi 11 kuChina mukupera kwegore rapfuura. Iyo kambani yakazozvizivisa mumusika weEuropean muna Kukadzi 8, asi chishandiso ichi hachisati chaenda kutengeswa mudunhu iri. Kunyangwe kudonha kwakapfuura kwakaratidza kuti kambani yaizovhura zvishandiso zvakasara mumutsetse imwe nguva muna Kukadzi, kusvika parizvino hatina kuona chero chiziviso chepamutemo kubva kukambani. Tichagadzirisa iyi posvo nekukurumidza patinonzwa zvakawanda kubva kuXiaomi.
Mi 11 akateedzana - Nguva dzose, Lite, Pro, Ultra, uye zvimwe zvakasiyana
Xiaomi anonzi ari kuronga kuvhura zvishandiso zvina mumutsetse weMi 4. Iyo yakajairika Mi 11 ndiyo yekutanga kubuda mujenya uye yakatotangwa muChina uye sarudza misika yeEurope. Chigadzirwa chinotarisirwa kuita nzira yekuIndia zvakare imwe nguva munguva pfupi iri kutevera.
Pamwe neMi 11, Xiaomi anonzi ari kushanda pane inodhura Mi 11 Lite, mureza weMi 11 Pro, uye inodarika Mi 11 Ultra. Idzi nhumbi nhatu dzakaburukira kumadhigirii akasiyana mumwedzi mishoma yapfuura, uye isu tine chivimbo kana zvishoma chekuti vanozotangwa munguva pfupi kwete kupfuura. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Xiaomi anogona kuvhura iyo Mi 11 Lite seMi CC11 muChina, zvichibva nekambani yekambani yekutumidza mazita.
A nyowani nyowani kubva kuXDA Senior Nhengo Deic inoratidza kuti Xiaomi ichatanga maviri akasiyana eMi 11 Lite - 4G musiyano wakadomwa zita rekuti "K9A courbet" uye 5G rakamisikidzwa "Renoir K9." Adam Conway kubva kuchikwata chedu akaitawo yakasimbisa iyo codename uye modhi nhamba (M2101K9G) yeMi 11 Lite 5G uye yaburitsa pachena kuti chishandiso ichi changobva kugamuchira chitupa cheGoogle Play.
Kubuda kwazvino kunoratidza kuti Xiaomi arikurongawo ku tangisa Redmi K40 nharembozha pasi peMi 11 amburera kunze kweChina. Redmi K40 (codename "alioth") ichavhurwa seMi 11X (codename "aliothin") mumusika weIndia, nepo Redmi K40 Pro + (codename "haydn pro") ichatangwa seMi 11X Pro (codename " haydnin pro ”). Mumisika yepasi rose, Xiaomi ichatangisa iyo Redmi K40 Pro + seMi 11i (codename "haydn pro global").
Xiaomi Mi 11 akateedzana: Magadzirirwo
Xiaomi Mi 11 Lite (yakaburitswa)
Xiaomi Mi 11 Pro (yakaburitswa)
Xiaomi Mi 11 Ultra / Redmi K40 (yakaburitswa)
Xiaomi Mi 11X (yakabuda)
Xiaomi Mi 11X Pro / Mi 11i / Redmi K40 Pro + (yakaburitswa)
Vakai N / A
Corning Gorilla Girazi Kukuvadzwa kumberi
Zviyero & Kurema N / A
6.81, QHD + AMOLED kuratidza
480Hz kugunzva kupindura chiyero
1500 nits inopenya kupenya
Hole punch kuratidza
6.67-inch AMOLED kuratidza
360Hz kubata kweyenzaniso sampling
1300nits yepamusoro kupenya, 900nits chaiyo kupenya
5,000,000: 1 kusiyana kwehuwandu
5G: Qualcomm Snapdragon 775 / 775G (isina kuziviswa)
4G: Qualcomm Snapdragon 720G
4x Kryo 680 Kubudirira Cores @ 1.8GHz
RAM & Kuchengeta
Kusvika ku12GB LPDDR5 + inosvika pa256GB UFS 3.1
Kusvika ku16GB LPDDR5 + inosvika pa512GB UFS 3.1
33W wiring inokurumidza kuchaja
Revers wired kuchaja rutsigiro
55W wiring inokurumidza kuchaja
50W isina waya yekuchaja nekukurumidza
10W re reware isina waya
55W GaN charger inosanganisirwa
67W wiring inokurumidza kuchaja
67W isina waya yekuchaja nekukurumidza
33W inokurumidza wired kuchaja
chibatiso N / A In-Ratidza Optical Fingerprint Sensor N / A N / A Side-yakaiswa chigunwe chechipunwe sensor Side-yakaiswa chigunwe chechipunwe sensor
Kutanga: 64MP ISOCELL Yakajeka GW2 ine OIS (5G), ISOCELL Yakajeka GW1 (4G)
Sekondari: 0.6x Ultra-yakafara
Chikoro chepamusoro: macro
Quaternary (4G chete): udzamu
Kutanga: 108MP, 1 / 1.33, sensor, f / 1.85, 1.6µm, OIS
Sekondari: 13MP, f / 2.4, 123 ° FoV, wide-angle sensor
Chikoro chepamusoro: 5MP, f / 2.4, AF, macro
Sekondari: 13MP yakafara-pakona
Chikoro chepamusoro: 5MP macro
Quaternary: 120x nhare
Sekondari: 48MP yakafara-pakona
Chikoro chepamusoro: 48MP nhare
Kutanga: 48MP IMX 582, f / 1.79
Sekondari: 8MP Ultra-yakafara kamera, f / 2.2, 119 ° FoV
Chikoro chepamusoro: 5MP tele macro kamera
Kutanga: 108MP Samsung HM2, f / 1.75
Mberi kamera (s) N / A 20MP, f / 2.4 20MP 20MP 20MP 20MP
Port (s) N / A USB Type C USB Type C USB Type C USB Type-C USB Type-C
Vatauri veStereo (5G musiyano chete)
Vatauri veStereo vakatariswa naHarman Kardon Vatauri veStereo vakatariswa naHarman Kardon Vatauri veStereo vakatariswa naHarman Kardon
Dolby Atmos chitupa
Hi-Res Audio chitupa
NFC (hapana NFC muIndian musiyano)
Wi-Fi 6 (E?)
Software MIUI 12 kana MIUI 12.5 MIUI 12 MIUI 12.5 MIUI 12.5 MIUI 12 MIUI 12
Zvimwe Zvikamu N / A Panguva imwe chete yekugovana odhiyo nemidziyo yeBluetooth N / A N / A
Ruvara tembiricha tembiricha
Xiaomi Mi 11 XDA Foramu
Sekutaura kwakaita Ben mukati maoko edu-on preview yeXiaomi Mi 11, chishandiso chinoratidzira yakanaka 6.81-inch QHD + AMOLED inoratidzira inozorodza pa120Hz uye makona pamativi ese mana. Iyo inoratidzira inopa resolution ye1440 x 3200 pixels uye pixel density ye515 PPI. Inoratidzira gomba-punch cutout mukona yekumusoro yekona yeiyo selfie kamera uye iri mu-inoratidzira zvigunwe zveminwe pasi payo inopetwa kaviri se sensor yemoyo.
Ipo iyo 120Hz pani iri paMi ​​11 isingapi chiyero chinoshanduka chekuzorodza senge Samsung Galaxy S21 Ultra, inogona kushanduka pakati pe30Hz, 60Hz, 90Hz, uye 120Hz, zvinoenderana nezviri mukati. Iyo pani ine 10-bit inokwanisa, inopa HDR10 + rutsigiro, uye ine yepamusoro kupenya kwe 1500nits. Iyo Xiaomi Mi 11 zvakare inorongedza akati wandei anotonhorera maficha maficha, seSuper Resolution, iyo inogona kusimudzira yako yekutarisa ruzivo kunyange zvakanyanya.
Mi 11 Ultra sekuonekwa muTech Buff PH's YouTube vhidhiyo
Leaks inoratidza kuti iyo Mi 11 Pro ichaisa yakafanana QHD + AMOLED kuratidza seyakajairwa Mi 11, kuyera 6.81-inches. Ichapa yakakwira zororo reti ye120Hz uye inoratidzira imwechete gomba-punch cutout mukona yekuruboshwe yekona. Parizvino, hatina rumwe ruzivo nezve chiratidziro chiri paMi ​​11 Pro, asi isu tinofungidzira kuti ichave iri iro rairo jira seMi 11. Sezvazviri maoko-pane vhidhiyo yeMi 11 Ultra kubva kuPhilippines YouTuber Tech Buff PH (izvozvi haisipo), iyo-yepamusoro-ye-iyo-dhizaini zvakare inotakura iyo yakafanana kuratidzira semamwe maviri mamodheru. Ose ari maviri Mi 11 Pro uye iyo Mi 11 Ultra inotarisirwa kuoneka premium kuratidza maficha seMEMC, Super Resolution, SDR-to-HDR kukwidziridzwa, uye AI kukwirisa.
Kunyangwe hazvo ruzivo nezve iyo Mi 11 Lite inoratidzirwa yanga iri diki kusvika parizvino, yakaburitsa mifananidzo yechigadzirwa mavara pamusoro Weibo inoratidza kuti ichave yakati sandara, kusiyana nemamwe mamodheru ari muMi 11 akateedzana. Izvo zvichave, zvakadaro, iine imwechete gomba-punch kamera kuiswa seimwe mamwe mamodheru. Mifananidzo yacho zvakare inoratidza kuti chishandiso chinogona kunge chiine chunkier bezels kana ichienzaniswa neese mamwe marongero, asi ivo vanofanirwa kunge vachiri nyore kuregeredza kune vazhinji vashandisi. Zvinoenderana nekubuda kwazvino, iyo Mi 11 Lite 5G ichave neiyo FHD + AMOLED kuratidza ine 90Hz yekuvandudza mwero.
Iyo Mi 11X, Mi 11X Pro, uye Mi 11i inogona kunge iine yakafanana 6.67-inch AMOLED FHD + pani ine mwero wekuzorodza we120Hz uye yekubata sampling chiyero che360Hz. Ichapa kupenya kwepamusoro kwe1300nits, Gorilla Girazi 5 kudzivirirwa, 5000000: 1 musiyano muyero, uye HDR10 + certification.
Iyo Xiaomi Mi 11 inoratidzira dhizaini yakafanana neyakatangira, iyo Mi 10 uye Mi 10 Pro. Iyo inopa yakajairika pasuru pamusoro kumberi nechiratidziro icho chisina musono chakakombama pamusoro pemakona kune 1.8mm simbi furemu iyo inoipa iyo yekutanga kutarisa uye kunzwa. Iyo curve pamativi echiratidziro yakanyanya kudomwa, nepo iro curve iri pamusoro uye pasi pechiratidziro iri yakajeka zvikuru. Iyo yekuratidzira inodzivirirwa naCorning's Gorilla Girazi Vanokundwa, iyo inopa 2m kudonhedza kudzivirirwa uye kaviri kukwikwidza kusagadzikana seyakambopihwa yekambani.
Kupfuura neshure, zvakadaro, inoratidzira nyowani "squircle" yakaumbwa kamera module ine yakatenderera sirivheri izwi rakakomberedza yekutanga 108MP sensor. Iyo chishandiso ine isinganzwisisike Xiaomi yekumaka yakananga kuzasi kwepaneru yekumashure, kusiyana nezvimwe zvazvino bhajeti zvinopihwa kubva kukambani.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Xiaomi inopa maviri akasiyana kumashure mapaneru dhizaini paMi ​​11, imwe ine chando matte pedzisa kumashure kwepaneru iyo yakapfava kune inobata uye imwe ine vegan dehwe kupera. Iyo kambani inopa iyo inotonhorera matte pedza musiyano mumitatu nzira - Midnight Grey, Horizon Bhuruu, uye Frost White - nepo vegan dehwe musiyano uripo mune maviri mavara sarudzo - Lilac Purple uye Honey Beige. Nekudaro, Xiaomi yakangotangisa maviri eaya matatu echando echando akasiyana - Midnight Grey uye Horizon Blue - mumusika weEuropean.
Panyaya yemachiteshi, iyo Xiaomi Mi 11 inoratidzira USB Type-C chiteshi pazasi yakatenderedzwa neSIM kadhi slot kune rumwe rutivi uye yekutanga maikorofoni uye mutauri grille kune imwe. Kupfuura pamusoro, chishandiso chine maikorofoni yechipiri padhuze neimwe grille yekutaurisa iyo inoratidza Harman Kardon yekumaka uye IR blaster. Iyo rocker rocker uye bhatani remagetsi zviri mukati mesimbi yesimbi pamucheto wekurudyi.
Ipo isu tatoona iyo Mi 11 mukubwinya kwayo kwese, isu tangoona imwe chete yakaburitswa mufananidzo weMi 11 Pro kusvika zvino. Mufananidzo wacho (kuburikidza MyDrivers) inoratidza kuti iyo Mi 11 Pro ichaisa dhizaini yakafanana neyakajairwa Mi 11 yechikamu chikuru. Nekudaro, chishandiso hachizoratidze imwechete kamera chitsuwa dhizaini. Panzvimbo peMi 11's squircle camera chitsuwa, iyo Mi 11 Pro ichatamba chitsuwa chakakura chakatenderedza chakatenderedza chine imwe kamera kamera uye inopenya yakakura. Isu taonawo dhizaini iyi mu yakaburitswa yekusimudzira poster zvechigadzirwa. Zvimwe kunze kweizvozvo, chishandiso chinotaridzika zvakafanana neyakajairika Mi 11.
Zvikwereti: Tech Buff PH
Kana iri iyo Mi 11 Ultra ine chekuita, kudonha kunoratidza kuti icharatidza yakatokura yakatwasuka yakatenderedza kamera chiwi. Vhidhiyo yambotaurwa yeYouTube inoratidza kuti kamera yechitsuwa ichasanganisira matatu maseru uye diki diki yekuratidzira. Kunyangwe isu tisingazive iwo maficha echiratidziro ichi, zvinoita sekunge ichakwanisa kuvhura chero chero app pafoni yako.
Tiri kufungidzira kuti Xiaomi akawedzera ichi skrini kubatsira vashandisi kutora zvirinani selfies nekamberi-yakatarisana nekamera kamera. Zvakawanda seMi 11 Pro, iyo Mi 11 Ultra inoita kunge iine yakafanana quad-yakakomberedzwa kuratidza seMi 11, iine imwechete-gomba punch cutout mukona yekumusoro kuruboshwe uye mashoma bezels mativi ese. Iyo chishandiso icharatidzawo imwechete stereo speaker speaker, kuisa bhatani, IR blaster, uye slim simbi furemu seMi 11.
Yakaburitswa mhenyu mifananidzo yeMi 11 Lite yakagovaniswa pa Weibo zvinoratidza kuti ichaita dhizaini imwecheteyo sevanilla Mi 11. Chigadzirwa chichaita mutambo wakafanana squircle kamera chitsuwa ine katatu kamera setup kumashure. Nekudaro, sezvambotaurwa, hazvizoratidzi kuratidzwa kwakakombama senge mamwe madhijitari mumutsetse. Hatina kumboona chero mimwe mifananidzo yakaburitswa kana kupa kwechigadzirwa parizvino, saka hatigone kutaura pane zvimwe zvigadzirwa. Sezvo isu tava kuziva kuti kuchave nemaviri akasiyana eMi 11 Lite, hatigone kuve nechokwadi kuti ndeupi musiyano unoratidzwa mumufananidzo uri pamusoro. Asi isu tinogona kusimbisa kuti chete 5G musiyano wechishandiso ndiyo inozoisa stereo speaker speaker senge yakasara yeiyo lineup.
Iyo yepamusoro-mhando kupa kweMi 11 Lite ine pakupedzisira yakaonekwa online kutipa kutarisa kwakanaka pamasikirwo ayo. Iyo nyowani inopa inobva kune anovimbika leaker Ishan Agarwal, uye inoratidza matatu mavara akasiyana eMi 11 Lite.
Xiaomi angangotangisa iyo Mi 11X, Mi 11X Pro, uye Mi 11i neakafanana dhizaini seyevo Redmi K40 akateedzana. Nekudaro, iyo kambani inogona kuita imwe miniti shanduko pamarudzi akasiyana siyana. Semuenzaniso, michina yacho ichaisa Xiaomi branding panzvimbo yeRedmi branding.
SoC, RAM, uye Kuchengetedza
Sezvambotaurwa, iyo Xiaomi Mi 11 inotakura Qualcomm's flagship Snapdragon 888 chipset. Isu takazvipira kufukidza paSoC, uye tinokukurudzira kuti utarise yedu zvakadzama tarisa iyo Snapdragon 888 uye kuongororwa kwemabhenji ayo.
Iyo Snapdragon 888 yakabatanidzwa ne8GB yeLPDDR5 RAM uye 128GB kana 256GB yekukurumidza UFS 3.1 yekuchengetedza. Ipo Xiaomi ichipa yakawanda yekutanga 12GB + 256GB musiyano weMi 11 kuChina, kambani haina kuivhura mumusika weEuropean.
Sezvinoitika pakubuda kwezvichangoburwa, ese ari maviri Mi 11 Pro uye iyo Mi 11 Ultra inorongedza chipu cheQualcomm's Snapdragon 888 chip. Iwo majaira angangouya anosvika kusvika ku12GB yeLPDDR5 RAM uye inosvika ku512GB yeUFS 3.1 yekuchengetera, asi parizvino hatina vimbiso maererano nezvakafanana. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Xiaomi yakapa kusvika 16GB ye RAM pane iyo Mi 10 Ultra, saka kambani inogona kuita zvakafanana neMi 11 Ultra.
Iyo Mi 11 Lite ichave iri inodhura kwazvo smartphone kubva mujenya uye, nekudaro, haizoratidzi yeQualcomm's flagship Snapdragon 8-akateedzana machipisi. Panzvimbo iyoyo, runyerekupe runoratidza kuti chishandiso chinotanga neiyo nyowani Snapdragon 7-yakateedzana chip. Maererano ne Weibo leaker Dhijitari Chat Station, chishandiso ichi chichave chisingaziviswe Snapdragon 7-dzakateedzana chip, iyo inoenda nenhamba yemhando SM7350. Qualcomm inogona kuzivisa iyo chip nyowani panguva, kana mazuva mashoma zvisati zvaitika, iyo Mi 11 Lite kuvhurwa, uye inogona kunzi iyo Snapdragon 775 kana iyo Snapdragon 775G. Inogona kunge iri yepakati-renji chip ine yakanyanya wachi kumhanya ye2.3GHz uye 5G kugona. Sezvinoitika pakubuda kwezvichangoburwa, iyo SoC ichabatanidzwa ne6GB ye RAM.
Kubuda kutsva kunoratidza kuti kuchave nemhando mbiri dzeMi 11 Lite - musiyano we5G unosanganisira yambotaurwa Snapdragon 775G chip uye 4G musiyano ine iyo Snapdragon 720G chip.
Iyo Mi 11X, yakafanana neiyo Redmi K40, inorongedza chipu cheQualcomm's Snapdragon 870 chip ine Adreno 650 GPU. Iyo Mi 11X Pro uye Mi 11i, kune rimwe divi, ichave inofambiswa neiyo inomira Snapdragon 888 chip ine Adreno 660 GPU.
Iyo Xiaomi Mi 11 inorongedza inoremekedzwa katatu kamera yekumisikidza kumashure, iine 108MP yekutanga kamera, 13MP yechipiri Ultra-yakafara kamera, uye 5MP macro kamera. Iyo chishandiso inoshandisa Samsung's ISOCELL Bright HMX 108MP sensor yekamera yayo yekutanga iyo inovimbisa mhedzisiro yakakura nekuda kwekuwedzera kweXiaomi.
Mumaoko edu-pane kufanoona, Ben akaona kuti iyo huru kamera yakaunza yakatsvuka uye yakajeka mifananidzo ine yakanakisa simba renji. Iyo kamera inopa razor-inopinza uye inokurumidza kutarisa uye yakanaka yakaderera-mwenje kugona. Iyo yekutanga sensor inoitawo basa rakakura ichitora vhidhiyo ine yakanakisa kugadzikana. Iyo yechipiri 13MP yakafara-angle shooter zvakare inoita basa rakanakira nezvakamira. Nekudaro, yavo yevhidhiyo kuita haina kunaka senge yekutanga sensor, uye inotambura mune ine simba renji zvishoma.
Nezve izvo zvakasarudzika zvakasarudzika zvine hanya, yekutanga 108MP f / 1.85 kamera inozvirumbidza ye1 / 1.33 ″ sensor inogadzira mifananidzo ine 1.6 largem hombe pixels. Iyo inopa OIS uye AF kugona. Iyo 13MP f / 2.4 yakafara-kona kamera ine 123 ° FoV, uye iyo 5MP f / 2.4 macro kamera inogona kusvika padhuze se3cm kuchinhu. Kupfuura kumberi, chishandiso chine imwe chete 20MP f / 2.2 selfie shooter iyo inogadzirawo 1.6µm 4-in-1 Super Pixel mifananidzo. Kuti uwane zvishoma nezveMi 11 chaiyo-yenyika kamera kamera, tarisa iyo mufananidzo uye vhidhiyo sampuli muchikamu chekamera chemaoko edu-pakuongorora.
Kuti ubatsire inoyevedza kamera Hardware, Xiaomi akarongedzawo akawanda maficha maficha muMIUI 12.5. Izvi zvinosanganisira kuwedzeredzwa husiku-modhi kugona neiyo yekutanga, Ultra-yakafara, uye selfie makamera, RAW-mwero kudzikisira ruzha rwehusiku modhi vhidhiyo, nhanhatu-tinya imwe AI cinema maficha senge Parallel World uye Freeze Furemu Vhidhiyo, iyo Magic Zoom modhi, uye zvimwe. Iyo Mi 11 inopawo rutsigiro rweHDR10 + kurekodha vhidhiyo, nyowani Pro Nguva-inopera modhi, uye AI Erase 2.0 yekubvisa nyore chinhu.
Runyerekupe runoratidza kuti Mi 11 Pro uye Mi 11 Ultra ichaita yakakura kwazvo kamera kamera kana ichienzaniswa neyakajairika Mi 11. Musiyano wePro unotarisirwa kuve nequad-kamera setup ine itsva 50MP yekutanga shooter ine hukuru hwepikisi saizi panzvimbo. ye108MP sensor inowanikwa pane vanilla Mi 11. Iwo mamwe malenzi maviri anogona kunge akafanana neiyo Mi 11, uye chishandiso chinosanganisira yakawedzera 120x telephoto kamera.
Iyo Mi 11 Ultra, zvisinei, haizoratidze iyo quad-kamera setup. Sezvinoonekwa muvhidhiyo yambotaurwa yeYouTube, chishandiso ichi chine matatu-kamera setup ine imwechete 50MP yekutanga kamera seMi 11 Pro, 48MP yakakura-kona kamera, uye 48MP 120x periscopic telephoto zoom lens. Kupfuura kumberi, chishandiso chinosanganisira imwechete 20MP selfie shooter.
Ose maviri akasiyana eMi 11 Lite ichaita ine 64MP yekutanga kamera, 0.6x Ultra-yakafara kamera, uye macro kamera. Nekudaro, iyo Mi 11 Lite 5G ichaisa Samsung's 64MP ISOCELL Bright GW2 sensor (S5KGW2), nepo Mi 11 Lite 4G ichizosanganisira Samsung's 64MP ISOCELL Bright GW1 sensor (S5KGW1). Asi XDA Senior Nhengo uye akavimbika Xiaomi tipster kacskrz ane izvozvi Akawanikwa humbowo hunoratidza kuti Mi 11 Lite 4G ichaita 5MP Samsung S5K5E9 macro sensor, 8MP Sony IMX355 wide-angle sensor, uye Samsung's 64MP S5KGW3 primary sensor. Kuburitsa kwakaparadzana kunoratidza kuti iyo vhezheni yeIndia yechishandiso inoisa sensor yekudzika panzvimbo peiyo 5MP macro sensor.
Iyo Mi 11X inosanganisira katatu kamera yekumisikidza kumashure, inosanganisira 48MP Sony IMX 582 primary sensor, 8MP Ultra-wide sensor, uye 5MP tele macro sensor. Iyo Mi 11X Pro uye iyo Mi 11i ichatambawo katatu kamera yekumisikidza, asi ine 108MP Samsung HM2 primary sensor pachinzvimbo. Zvese zvitatu zvishandiso zvinotakura imwechete 20MP selfie shooter.
Bhatiri uye Kubhadharisa
Iyo Mi 11 inorongedza yakakurisa 4,600mAh bhatiri iyo inotsigira 55W wired yekuchaja nekukurumidza uye 50W isina waya yekuchaja nekukurumidza. Iyo chishandiso zvakare inoratidzira rutsigiro rwe10W inodzosera isina waya kuchaja, ichikubvumidza iwe kubhadharisa zvimwe zvishandiso mune piniki. Zvinosuruvarisa, Xiaomi akatevera mumakwara aApple uye akabvisa charger kubva mubhokisi pakavhurwa mudziyo muChina. Nekutenda zvakadaro, iyo kambani ichaendesa 55W GaN inokurumidza charger mubhokisi kune vese vatengi veEurope pasina imwezve mutengo.
Iyo Mi 11 Pro uye Mi 11 Ultra ichagashirawo yakakomba bundu mumagetsi bhatiri uye nekukurumidza kuchaja kugona. Kuvuza kwakapfuura kunoratidza kuti zvishandiso zvinorongedza bhatiri re5,000mAh ne tsigiro ye67W inokurumidza wired kuchaja uye 67W inokurumidza isina waya kuchaja, uye 10W inodzosera isina waya kuchaja. Mishumo inoratidzawo kuti Xiaomi iri kushanda pane inokurumidza 80W yekukurumidza kuchaja mhinduro, asi isu hatigone kuve nechokwadi kana ichatanga neMi 11 lineup. Zvakakosha kutaura kuti nepo iyo Mi 10 Ultra kubva gore rapfuura yakaratidza rutsigiro rwe120W wired yekuchaja nekukurumidza, Xiaomi inogona kusapa zvakafanana paMi ​​11 Ultra.
Certification zvinyorwa zveMi 11 Lite zvakaratidza kuti chishandiso ichi chinosanganisira diki 4,150mAh bhatiri. Kunyangwe isu tisingazive zvakawanda nezve yayo yekukurumidza kuchaja kugona, Xiaomi inogona kupa 33W wired nekukurumidza kuchaja rutsigiro pachigadzirwa, zvakafanana neiyo ichangoburwa Redmi K40 akateedzana. Sekureva kwekudonha kwazvino, iyo Mi 11 Lite 4G inotakura 4,250mAh bhatiri nerutsigiro rweiyo reverse isina waya kuchaja. Nepo kuburitswa kusingaratidze huwandu hwebhatiri remusiyano we5G, vanosimbisa kuti chishandiso chichava ne33W yekukurumidza kuchaja rutsigiro.
Iyo Mi 11X, Mi 11X Pro, uye Mi 11i inorongedza 4,520mAh mabhatiri nerutsigiro rwe33W inokurumidza wired kuchaja.
5G uye Kubatana
Kutenda iyo Qualcomm Snapdragon 888 yakasanganiswa Snapdragon X60 modem-RF system, iyo Mi 11 inopa 5G rutsigiro pamabhendi akasiyana siyana, kusanganisira n1 / n3 / n5 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78 / n79. Chigadzirwa chacho chinotsigirawo mbiri mbiri dze5G. Pamwe chete neizvozvo, chishandiso chine Wi-Fi 6 rutsigiro, Bluetooth 5.2, yakawanda-inoshanda NFC, uye IR blaster.
Iyo Mi 11 Pro uye Mi 11 Ultra inogona kunge iine imwecheteyo yekubatanidza sarudzo seiyo Vanilla Mi 11. Zvisinei, Xiaomi anogona kupa Wi-Fi 6E rutsigiro pane yepamusoro-ye-iyo-mutsara musiyano, asi isu hatina kuona chero kubuda kutsigira chirevo ichi.
Sezvambotaurwa, iyo Mi 11 Lite ichauya mune maviri akasiyana - iyo 5G inokwanisa vhezheni inofambiswa neiyo nyowani Snapdragon 7-yakateedzana chip uye 4G vhezheni ine iyo Snapdragon 720G chip. Ese ari maviri majaira anozoisawo NFC rutsigiro musiyano wepasi rose, zvisinei, iyo vhezheni yakatangwa muIndia haizoisa NFC.
Parizvino, hatigone kutaura nezve kugona kwe5G kweMi 11X, asi tinogona kuva nechokwadi chekuti ichapa Wi-Fi 6 neBluetooth 5.1. Sezvo Xiaomi kazhinji isingape NFC pamidziyo yayo muIndia, iyo Mi 11X inogona kusaratidza NFC, senge yayo Chinese Redmi shamwari. Iyo Mi 11X Pro ichapa SA / NSA 5G, nekutenda kune yakasanganiswa 5G modem pane iyo Snapdragon 888 chip. Iwo majaira anozoisawo Wi-Fi 6E rutsigiro uye Bluetooth 5.2. Zvakawanda seMi 11X, Xiaomi inogona kusapa NFC paMi ​​11X Pro, asi iyo Mi 11i inogona kupa NFC rutsigiro.
MIUI 12.5 uye Android 11
Kunyangwe Xiaomi akatanga iyo Mi 11 ine MIUI 12.5 yakavakirwa Android 11 muChina, musiyano wepasi rose hauna kuvhura pamwe neazvino software kuburitsa. Pane kudaro, Xiaomi akaivhura neMIUI 12 yakavakirwa paApple 11 uye akavimbisa kuburitsa iyo gadziriso neQ2 2021. Asi isu tine humbowo hunoratidza kuti iri kuuya Mi 11 Pro uye Mi 11 Ultra ingangodaro yakatangisa neMIUI 12.5 kunze kwebhokisi. Tisati tasvika pane izvozvo, zvakadaro, heino tariso yekukurumidza pane ese matsva maficha akaisirwa mune MIUI 12.5 kugadzirisa:
MIUI 12.5 shanduko
Nyowani: Mhinduro kumasaini ikozvino yave pakarepo
Nyowani: Iine makumi maviri nguva simba rekupa, iko zvino pane mashoma mashoma pane izvo iwe zvaungaone pane yako skrini.
Nyowani: Neyakajairwa dhizaini modhi gadziriso, chero foni inova inokurumidza mushure mekusimudzira.
Optimization: MIUI yakawedzera kureruka, nekukurumidza, uye yakasimba.
Nyowani: Iyo nyowani nyowani yemaficha inoita kuti kufamba kunyatsoitika.
Nyowani: Nyowani UI dhizaini yakanangana nekuona uye kugadzira kudyidzana kwako nedhizaisi kufanana neupenyu.
Nyowani: Musanganiswa wemasikirwo inzira nyowani inonakidza yekugadzira yako wega ruzha system.
Nyowani: Mazana ehurongwa manzwi anomiririra mhuka kubva kumativi ese epasi.
Nyowani: Stereo system inonzwika.
Nyowani: Mount Siguniang super Wallpaper.
Nyowani: Iye zvino unogona kuona kuti ndeapi maapplication anowana clipboard yako uye kutonga kupinda.
Nyowani: Kushandisa fungidziro yenzvimbo kunowedzera mapoinzi kudziviriro yekuvanzika.
Nyowani: Iwe unogona ikozvino kubata mvumo nyoro uye inoenderana nehunhu maitiro eapurogiramu pasina.
Nyowani: hunhu hwemapeji ewebhu hunoteverwawo izvozvi, izvo zvinokubatsira iwe kuvharira zviito zvisingadiwe uye zvakaipa
Nyowani: Zvino zvava kwauri kuti ndiani uye riini anogona kuteedzera maitiro ako epamhepo.
Nyowani: Zvese zvishandiso izvozvi zvinouya nesecurity statement kubva kuGetApps.
Nyowani: Yakavanzika njodzi njodzi scanner.
Nyowani: Chengetedza kuti ndeapi maapplication anowana uye kudzima zvinhu kubva kune yako Garari.
Nyowani: Ongororo yakazara yeese mvumo inonzwisisika.
Nyowani: Uchazoziviswa pese panobvumidzwa mvumo yenjodzi yepamusoro uye unokwanisa kuvhara zviito zvinoenderana.
Optimization: Iyo-nyowani-nyowani yekuchengetedza peji peji.
Nyowani: Nyora mepu dzepfungwa dzine zvimiro zvakaoma.
Zvitsva: Zvishandiso zvitsva zvekushongedza uye kugadzira.
Nyowani: Dhinda uye bata sketch yekugadzirisa sitiroko otomatiki.
Nyowani: Pfupiso yechiratidzo ikozvino inokutendera kuti iwe ugadzire manotsi, mabasa, uye zvinyorwa kwese kupi.
Nyowani: Zvidimbu zvinochengetedza zvinyorwa, ma URL, uye mifananidzo kuManotsi mune mashoma mashoma tapi.
Nyowani: Dynamix marongero anoita kuti aunze typography muManotsi padanho nyowani.
Iwe unogona kusanganisa yako foni uye komputa mune imwechete inoshanda chiteshi.
Unogona kutarisa MIUI notices uye kuvhura mafoni maapp pakombuta yako.
Zvirongwa kubva pafoni yako zvinogona kupihwa kukomputa yako.
Zvinhu zvinoteedzerwa pafoni izvozvi zvinogona kunamirwa pakombuta uye zvinopesana.
Mifananidzo uye screenshots kubva kune mbozhanhare inogona kushandiswa ipapo pakombuta.
Mapeji eWebhu anogona kugoneswa kubva pane chimwe chinhu kuenda pane chimwe.
Unogona kuendesa mafaira kune yako nharembozha uchishandisa iyo "MIUI +" pani pakombuta yako.
Nyowani "File Manager" uye "Mazano" emakomputa.
Nyowani: Instant vatumwa ikozvino vanotsigira zvinoyangarara windows.
Nyowani: Inoyerera windows inogona kukurumidza kutsiviwa ne yakazara-skrini shanduro dzemaapp.
Nyowani: App flashcards anoratidza kiyi info kana maapplication akaratidzirwa sekuyangarara windows.
Dzidza zvakawanda nezve maficha matsva mu "Special maficha".
Nyowani: Unogona kuyera chiyero chemwoyo wako uchishandisa kamera izvozvi.
Nyowani: Kutanga kurekodha kumhanya, kufamba, uye kuchovha bhasikoro nemaoko, uye kunakirwa nemazhinji emakosi epamhepo ekudzidzira.
Optimization: otomatiki Workout kuzivikanwa kwakanyatsojeka izvozvi.
Nyowani: "Ripples" mifananidzo yekutora maapplication.
Nyowani: "Burst" mifananidzo yeininstalling maapplication.
Nyowani: Nyowani dhizaini yeapp mafolda.
Nyowani: Chimiro chakamira cheZvazvino.
Nyowani: Iyo ratio chiyero inochinjika kune yekunze yekutarisa otomatiki panguva yekukanda.
Nyowani: odhiyo yeapp irikukandirwa muhwindo rinotenderera yakaparadzaniswa kubva kune imwe odhiyo.
Nyowani: password maneja inokutendera iwe kuchengetedza mapassword mugore.
Nyowani: Unogona kugovana nzvimbo yekushandisa nevamwe vanhu vari mumhuri yako yekugovana boka.
Nyowani: Ruzivo rwenzvimbo runogona kutorwa otomatiki mudziyo usati wabva.
Nyowani: Chinja mifananidzo ive PDF.
Mi Vanotakura Mabasa:
Nyowani: Unogona kubata akawanda SIM makadhi izvozvi.
Nyowani: Iyo iri nyore nzira yekufambisa chiya chekushandisa uchishandisa scrollbar.
Nyowani: Mashandiro mabhatani anotsigira kuchinjika pakati pemitauro uye keyboards.
Nyowani: Unogona kudzvanya nekubata mabhatani ebasa kuti uwane mamwe maficha.
Nyowani: Tsika dzetsika dzemakhibhodi.
Nyowani: Mafonti ekugadzirisa uremu sarudzo yechitatu bato mafonti.
Kugadziridza: Zvimiro zvemunhu zvemapikicha ehurongwa, mifananidzo, uye manzwi.
Nyowani: Wallpaper dhizaini mune iyo lite mode.
Optimization: Yakagadzirwazve Incognito modhi.
Optimization: Mapeji anotakura nekukurumidza izvozvi.
Optimization: Yakagadziridzwa chishandiso chinodzora nzvimbo
Optimization: Yese-nyowani dhizaini.
Pamwe pamwe neshanduko dzambotaurwa, iyo Mi 11 zvakare inokwanisa kugovana odhiyo pamwe neakabatana maBluetooth audio accessories panguva imwe chete. Izvi zvinokutendera iwe neimwe yeshamwari dzako kuteerera mimhanzi imwechete kubva kufoni yako usingakanganise vamwe. Tinotarisira kuona mashandiro akafanana pane mamwe maviri madhijitari mumutsetse.
Zvino, kuuya kune humbowo. Vhidhiyo yambotaurwa yeYouTube inoratidza zvakajeka iyo Mi 11 Ultra inomhanya a kuvaka kwepasi rose kweMIUI 12.5. Izvi zvinotitungamira kuti titende kuti Xiaomi inogona kunge iine kuburitswa kwakadzikama kwakagadzirira panguva yekutanga, uye iyo Mi 11 Pro uye Mi 11 Ultra inogona kuuya neMIUI 12.5 kunze kwebhokisi. Kunyangwe kana vakasadaro, Xiaomi achaburitsa iyo update munguva pfupi yapfuura kuvhurwa, sezvo kambani yatove yakazivisa hurongwa hwekuburitsa MIUI 12.5 kuenda kuMi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T, uye Mi 10T Pro muQ2 2021.
Yakaburitswa mhenyu mifananidzo yeMi 11 Lite (yakasungirirwa pamusoro) inoratidza chishandiso chinomhanyisa kuvaka kwepasi rose kweMIUI 12 yakavakirwa paApple 11. Izvi zvinotitungamira kuti titende kuti chishandiso hachigone kuvhura neXiaomi yazvino MIU 12.5 kuburitswa. Nekudaro, kana iyo kambani iine yepasi rose kuvaka yakagadzirira munguva yekumisikidzwa, inogona kutumira chishandiso ine yazvino kugadzirisa.
Iyo Mi 11X, Mi 11X Pro, uye Mi 11i inogona kuvhura neMIUI 12 yakavakirwa Android 11 kunze kwebhokisi. Nekudaro, Xiaomi inogona kuvhura michina ine MIUI 12.5, kana iyo yekuvandudza yakagadzirira panguva iyo zvishandiso zvaziviswa zviri pamutemo.
Xiaomi Mi 11: Mutengo uye Kuwanika
MuChina, iyo Mi 11 yakatangwa pamutengo wekutanga weCYY 3,999 weiyo 8GB + 128GB musiyano. Iyo 8GB + 256GB musiyano wechigadzirwa iri mutengo paCYY 4,299, nepo iyo 12GB + 256GB musiyano uri mutengo paCYY 4,699. Iyo chishandiso yatovepo kutengwa munyika kuburikidza neXiaomi webhusaiti uye ese makuru eCommerce chiteshi.
Iyo Mi 11 inotengeswa pa € ​​749 yeiyo 8GB + 128GB musiyano muEurope, iine 8GB + 256GB musiyano unoenda € 799. Kunyangwe Xiaomi isiri kupa iyo 12GB + 256GB SKU mumusika weEuropean, iyo kambani inoronga kuvhura Special Edition vhezheni ine yakasarudzika-inoshandura-kumashure pani. Iyo kambani haina kuburitsa chero kongiri ruzivo nezve izvi zvakasiyana panguva ino, kunze kwekuti ichazowanikwa mune mashoma mashoma.
Xiaomi achiri kuvhura iyo Mi 11 mumusika weIndia, uye hatina chero mutengo kana ruzivo rwekuwanika kwedunhu parizvino. Isu tinogadziridza iyi posvo kambani painogovana ruzivo rwese rwakakodzera.
Saizvozvowo, isu hatina mitengo uye zvekuwanika ruzivo rweMi 11 Pro iri kuuya uye Mi 11 Ultra izvozvi, asi unogona kutarisira kuti dzive dzinodhura zvishoma pane yakajairwa Mi 11. Iyo Mi 11 Lite 5G, kune rimwe divi , ichave yakachipa, kunyanya tichifunga kuti kune runyerekupe kuuya neSpapdragon 7-yakatevedzana SoC, iyo 64MP katatu kamera yekumisikidza, uye ratidziro. Iyo Mi 11 Lite 4G ichave inodhura zvakanyanya sezvo iine Snapdragon 720G chip uye yekare 64MP sensor.
Parizvino, isu hatina mitengo kana ruzivo rwekuwanika kweMi 11X, Mi 11X Pro, kana iyo Mi 11i. Tichagadzirisa iyi posvo nekukurumidza patinodzidza zvakawanda kubva kuXiaomi.
Ndeapi mafungiro ako pane Xiaomi Mi 11 akateedzana? Iwe unofunga kuti Xiaomi ichaunza iyo Mi 11 Ultra kumisika yepasi rose? Tiudzei muchikamu chemashoko pazasi!
The post Xiaomi Mi 11 akateedzana: Hezvino zvese zvatinoziva nezve Xiaomi's 2021 mureza wekumusoro! yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Iyo Yakanakisa Galaxy S21 Dzimwe nzira - Iwo Mafoni Epamusoro ekutenga panzvimbo!